Archive du 15-févr-2022
Hoentina aiza marina ny firenena ? Mpitondra tsy matotra, Fanjakana mikorontan-dava
Fa hoentina aiza marina ny firenena? Mpitondra tsy matotra, fanjakana mikorotan-dava no hany misongadina sy miharihary eto.
Tsy velon-kantenaina, tsy maty hafoy…
Efa rora laniana sisa ny fampanantenana etsy sy eroa, ary saritsarim-pampandrosoana sy endrika ivelany sisa hisintonana ny fon’ny Malagasy,
Fanonerana ny fotoana tsy nianarana Namoaka naoty sy tetiandro ny minisitera
Namoaka tenimita na « note circulaire » mikasika ny fanonerana ny fotoana tsy nianarana Minisiteran’ny fanabezam-pirenena mba hisian’ny rindran-damina.
Fikasana hamono olona Nalaina am-bavany omaly tany an-tranony i Raissa
Taorian’ny nahaterahan-dRazaivola Raissa ny herinandro lasa teo dia fantatra fa notanterahina omaly alatsinainy 14 febroary 2022 ny fihainoana sy ny fakana am-bavany azy notanterahin’ny mpitandro ny filaminana.
Raharaha Imbiki Voatonontonona ihany koa ny Minisitra Tinoka R
Niala iny ny Minisitry ny Fitsarana Atoa Imbiki Herilaza rehefa voatonontonona tamin’ny raharaha goavana mamofompofona kolikoly,
Mpianatra iray nisy namono Ahiana ny korontana any amin’ny oniversiten’i Toamasina
Mamofompofona korontana indray ao amin’ny oniversite Barikadimy - Toamasina amin’izao manoloana ny raharaha nahafatesana mpianatra iray avy any atsimo. Raha ny fandehan’ny
Famerenana ny hasin’ny fihavanana Namaly ny antson’ny AKATA ny CFM
Taorian'ny fe-potoana 15 andro nomen'ireo mpandala ny soatoavina malagasy sy ny fomban-drazana tamin'ireo mpitondra eto amin’ny firenena mba handaminana ireo lafin-javatra maro mitranga tsy mifanaraka intsony
Fahadoboana eto Antananarivo Tapi-dalan-kaleha ny fanjakana
Tsy mahita vahaolana amin’ny fahadaboana miseho eto an-drenivohitra mihitsy ny fanjakana foibe sy ny kaominina ambonivohitra Antananarivo rehefa fotoam-pahavaratra tahak’izao indrindra ny filatsahan’ny orana.
Fanalana sy fialàna minisitra Manomboka misy mivoy resa-poko sy fihaviana
Manomboka misy mivoy ankehitriny ny resaka foko sy fihaviana manoloana ny toe-draharaham-pirenena miseho. Mifoha io taorian’ny fametraham-pialan’ny Minisitry ny Fitsarana Atoa Imbiki Herilaza.
Naivo Raholdina “Miangatra ny fitsarana misy amin’izao”
Tsy ohatran’izao no niafaran’ny minisitry ny fitsarana izay nametra-pialana teo, Imbiki Herilaza, raha nihaino ny teniko izy, hoy ny depiote Naivo Raholdina, naneho ny alahelony manoloana ny zava-misy omaly.
Pastera Heritiana « Ny fivavahana ihany no hahafana manohitra ny fijangajangana »
Fetin’ny fijangajangana ny fetin’ny mpifankatia izay nankalazaina omaly alatsinainy 14 febroary ho an’ny sasany ka ahiana hamotika fiainan’olona maro.
Fandrafetana governemanta Ho sahirana tanteraka i Rajoelina
Na ho ela na ho haingana, tsy maintsy hiroso amin’ny fanamboarana governamanta ny Filoha Rajoelina na vao ny volana janoary lasa teo aza no nilaza fa tsy voatery ho vahaolana foana ny manolo minisitra.
Kaominina Talatamaty Hohatsaraina ny fomba fitantanana ny tsena
Hohatsaraina ny fitantanana ny tsena eo anivon’ny kaominina Talatamaty, distrikan’Ambohidratrimo. Tonga nidina ifotony nijery ny zava-misy ny ben’ny tanana Atoa Elie Dominique omaly.
Miverina Repoblika faha-II sy ny tetezamita Kitolotolotra sy kimoramora sisa vahaolana…
Mifankaiza amin’ny politikan’ny menaka mora sy vary mora nanomboka tamin’ny 2009 ny politikam-pitantanana ankehitriny?
Minisiteran’ny fitsarana Nahazo fitaovana mitentina 108.000 dolara
Tontosa omaly alatsinainy 14 febroary 2022 tetsy amin’ny minisiteran’ny fitsarana etsy Faravohitra ny lanonana fanolorana fitaovana informatika sy ho an’ny birao avy amin’ny biraon’ny firenena mikambana
Minisitry ny fitsarana mpisolo toerana Efa miteraka adihevitra sahady ny fanendrena azy
Efa niteraka adihevitra be ny fanendrena ny filohan’ny vaomiera lazaina ho mahaleotena misahana ny fifidianana na CENI, Dama Arsène Andrianarisedo, ny 7 desambra 2021 teo.
Alasora Fonosan-drongony 400 sy basy iray no tratra
Tratran'ny teo anivon'ny CSP tao Alasora am-body omby ny lehilahy 4 izay miaramila miana-draharaha mitondra ny gradina Kaporaly ny iray,